Free Download ayaa Sims 2 Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Aspyr Media: The Sims 2 Mac
Aspyr Media: Sims ayaa 2 Mac
Genetics dhawaan soo bandhigay, ciyaartoyda xakamayn karo Sims oo dhan uu nool yahay, oo dhex mari DNA ah si ay jiilka soo socda. Waxey la hiddo labada gudbinta jirka oo qof sifooyin. Waxaad u abuuri karaan iyo ciyaaro sitcom ee dalwaddii doorataa mid rajo ka ahaayeen shan, Fortune, caanka, Romance iyo aqoonta. Intaas oo dhan oo hadafka nolosha keeni kartaa Sims si aad u soo saaro rabitaanka iyo cabsi, taas oo la mid ah sida xaqiiqada dhabta ah.
Hiddaha marayay farcanka
Sim ayaa 2 ayaa dhawaan la soo bandhigay oo la genetics. Player Ma xakamayn karo oo kaliya Sims ay la noolyahay, laakiin ay jiilka xiga dhaxli hiddo, taas oo abuuri kartaa qof la mid ah oo la mid ah jirka iyo sifaadka shakhsiyeed. Waxa ay ku siinaysaa ciyaaryahan ee fursad kale oo ay kor u khasaaraha ka mid ah Sims ay.
Movie-samaynta screenplay faahfaahsan
Ku darista aan dhamaadka lahayn fursado hal abuur leh, waxaad samayn kartaa filim ama opera saabuun ah oo kuu gaar ah leh kuwa muuqaalada film-samaynta cusub. Sidaa daraadeed, ciyaartoyda ku been abuuran karaa kabka, xakameeyo camera ah, gogol xaadhayaa iyo qabtaan screenplay kuu gaar ah in tallaabo. Faahfaahin kasta waxaad ka arki kartaa by zooming ku dhow la leh camera cusub.
Sida loo ciyaaro, Beddelaan, iyo Edit FLAC Faylal ay ku Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
Sida loo ciyaaro, Beddelaan iyo Edit WMA Faylal ay ku Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
Ezvid u Mac: Samee duubey oo Home Videos Si fudud ee Mac OS